Ulawulo lwelungu | Martech Zone
UJui Bhatia sisiCazululi seSoftware e Ngobuchwephesha, Indiya. Ngamava kumacandelo aqhutywa yitekhnoloji, ulwazile ulwazi lwakhe malunga nendlela (i) kunye nezinto (ezenziwayo) ezenzelwe ishishini. Kananjalo unomdla wokwabelana ngolwazi analo ngezihloko ezinxulumene netekhnoloji kunye nabafundi abanokunceda naluphi na uhlobo lweshishini.
UJim Berryhill uchithe ngaphezulu kweminyaka engama-30 kwintengiso yesoftware kunye nolawulo lokuthengisa, ekhokela amaqela asebenza kakhulu e-ADR, CA, Siebel Systems, nakwi-HP Software egxile kuthengiso lwexabiso. Usekele i-DecisionLink ngombono wokwenza ixabiso labathengi libe yinto yeqhinga ngokuhambisa iqonga lokuqala lolawulo lwexabiso lomthengi.
UMax nguMkhokeli weMpumelelo woMthengi e Pushwoosh. Wenza abathengi be-SMB kunye nabamashishini ukuba bandise iiprojekthi zabo zokuthengisa ezizenzekelayo ukuze kugcinwe aphezulu kunye nengeniso.